Chung-Ang University - Cinema South Korea
Acronym : CAU
inotangwa : 1918
Musakanganwa kuti kurukura Chung-Ang University
Kunyoresa pana Chung-Ang University
Chung-Ang University ari oga urongwa chete 30,000 vadzidzi uye 982 fakaroti nhengo. Inoitwa 10 Rokutenderwa mumakoreji uye 16 girajuweta zvikoro. It unoshanda pazvikoro zviviri, muSeoul uye Anseong, Korea.
dzakasimbiswa 1918, CAU atsungirira kuburikidza inorwadza munhau Korea vomuzuva, pokutsigira yayo yakanaka "Chokwadi uye Ruramisiro". kubvira ipapo, CAU atora munhu kutungamirira basa kurera vakadzidza rudzi. Airemekedza sezvo kutungamirira sangano dzidzo kugovera unhu, CAU rawedzera zvokuti kumhanya utsanzi mune dzidzo omunharaunda.
Zvizere accreditied neShumiro Education of Korea, CAU inopa zvakawanda tsvimborume wacho, tenzi uye doctorate zvirongwa kusanganisira kuchikoro mutemo, yose dance zvirongwa uye chikoro zvokurapa. Nemhaka zvikoro izvi 'noutano mabasa, CAU akawana pamusoro pamutemo munyika kubva Most kwemakore masere.
Uyezve, CAU azivikanwa sezvo rudzi yepamwoyo muminda Pharmacy, tsika uye nounyanzvi dzidzo. Achibatsirwa ayo muzvikoro unyanzvi uye tsika nemagariro, yunivhesiti anomira pakati Korean tsika chinozunguzirwa, Pari kutsvaira Asia uye mberi.
Somunhu oga yunivhesiti zvikuru, Chung-Ang University iri vakazvipira kutungamirira zvayo vadzidzi Korean uye munyika dzakawanda kufungidzira zvinangwa zvavo upenyu uye vabudirire hwavo kunonyanyisa zvinogona vari kuwedzera makwikwi nzanga zvizere.
Dr. Bum Hoon Park haina kugadzwa sezvo yechi12 University President muna February 2005. Sezvo yake yokutanga basa pamusoro sarudzo, iye aitarisira kunyatsoongorora yeKorea Council for University Education, kumusika pamwe guru, BK21, pokugadzwa Professional Graduate School Mutemo, uye nezvimwe National emakambani.
Kugadzirisa Nedzidzo Science Technology weVadzidzisi Vedare, iyo yakanga mukuru pachimirirwa nyaya, akanga akabudirira saka zvakanzi nominated aitungamirira yunivhesiti uye paakavapa Grant kugadzira (KRW 9,100,000,000) ringafananidzwa guru mukwikwidzi mumayunivhesiti, pasinei yayo-gore 1 probationary nguva.
Zvichitevera kugadzirisa Rokutenderwa zvirongwa, arirwise pamusoro admissions itsva, kunyoresa ano vadzidzi, mamiriro ezvemari uye kwose kurapa zvinyorwa zvitatu zvikoro kwounyanzvi uye 11 unyanzvi zvikoro, vakanga dzakaongorora kuziva nzvimbo kuvandudza uye kuvandudza madzidzisiro. saka, 32 kupererwa ne 42 tsvimbo kubva nyanzvi kuzvikoro uye zvikoro kushandiswa tidzokere payunivhesiti chikoro mukuru, uye 10 nzvimbo neb. Nhengo tiende kunoshandira chikoro mukuru vave resourced kuti vashumire chikuru tsvarakadenga iri achiumba Research Pokutanga Group (Staff), yokuvaka kweutongi tsvakurudzo-centric.
zibukanana 2018(2001-2004), yaiva urongwa kukura afunga pasi rechi11 mutungamiri yunivhesiti kutakura yunivhesiti kurutivi yunivhesiti kupfura chiratidzo pedyo Centenary Anniversary, akanga kuzodzosera vakapiswa sezvo CAU2018 +(2005-2008). CAU2018 + rinotaura komukadzi ngakuite indekisi kuti maindasitiri akasiyana-siyana uye panobva kutarisirwa kwemari zvizere. Kuti aite zvinangwa, CAU2018 + rakatangwa mumatanho maviri.
Nokuti mana makore Dr okutanga. Bum Hoon Park kuti izwi muhofisi, pfuma vakanga kwazvo paakapiwa mune dzidzo / midziyo tsvakurudzo. saka, pakukura Mutemo Hall rwacho rakavakwa muna February 2007, uye tenzi urongwa wakavhomorwa amutsira pakuvaka Pharmacy uye Natural Science R&D Centers kumativi Main Entrance vari kembasi 1, uye ane Engineering R&D Center pedyo jimunasiyamu,
mu 2008, Nhau Practice Section hwakagadzwa muMutemo Hall uye 400 mamwe mawadhi akawedzerwa ari affiliate muchipatara. zvakanyatsonakanaka, ari Chung-Ang Site Construction Plan, waibatanidzwa CAU2018 + Development Plan zvakatanga.
In November 2007, mvumo rwaiwanikwa kubva Hannam-si, nokuti pakuva tertiary, Hannam kembasi. Camp Colbern, yaiva kare US Army instillation pamusoro 86,000 pyeong vachapiwa kunatsiridzwa kuti chinangwa. A chikwata chichange chakasungwa paminiti pasi munda atarisire basa.
244 yakazara kudzidzisa mudonzvo vakanga basa pakati 2005 uye 2009, uye kwetemu wokutanga 2009, 25 yakazara uye chikamu-nguva mudonzvo vakanga basa.
Mutemo uye Medical Zvikoro dzakatangwa muna March 2009.
KRW 40 bhiriyoni okukura mari, KRW 166.3 bhiriyoni nechitarisiko tsvakurudzo ngaape, uye KRW 17.3 bhiriyoni vehurumende rubatsiro dzinounzwa sezvo hurumende-mari zvebhizimisi vave richengetwe pamusoro 4 makore kubva Dr. Bum Hoon Park kuti vatsaurire muhofisi. Kuwanda KRW 223.6 bhiriyoni ndiro rakakura kupfuura mamwe ose mari yakasimbiswa mari munhau kuyunivhesiti.
In May 2008, vesangano pose, Doosan Group, akanga achitaurwa nevanopinda sezvo sangano iri rokudzidzisa, uye Yong-Sung Park akasarudzwa sezvo wa9 sachigaro Board.
Kugadzwa Chairman Park, uyo nekambani yacho indasitiri-kuchinja kwezvinhu Doosan Group kubva yevatengi nhumbi yeheavy indasitiri, unomiriri kuberekwazve kuyunivhesiti. mukati 80 mazuva kutora hofisi, musangano wakaitwa kudzidzisa tsvimbo 27 Nyamavhuvhu 2008, apo CAU2018 + Mid-Term Development pakaziviswa pamwe itsva nzira mirayiridzo "Choice uye Fungai, Nokusimbaradza Executive Mano, Pokugadzwa zvakanaka Cycle Structure ".
The Degree Management System hwakasimbiswa kukurudzira vadzidzi kuti kudzidza zvakanaka, sezvo kuti kudzidza, vadzidzi vave kuwana risingamboshandisi dhigiri rokumanikidzirwa nyaya dzakadai Chirungu uye Accounting.
Kuti nokutsigira kwakadai tsvakurudzo, dzidzo uye tsika zvinobudirira, chinhu R&D Center nokuti College of Pharmacy uye Dormitories itsva vadzidzi zvakavakwa, Central Library kunatsiridzwa, uye chipatara akawedzera kuti aenderane 300 mamwe nemawadhi.
Research zvirongwa Vari rinotsigirwa Unokosha Committee nokuda Kusimbisa Research Marketability.
kuchinja kwakadaro vakatowana zvakaguma pakunzi makambani matsva matanhatu yechipiri nzendo BK21 zvebhizimisi, uye bhajeti pakati KRW 6 bhiriyoni kuitwa dzinounzwa kuna aitungamirira pakutsvakurudza chikwata, nokudaro zvinenge "chisarudzo Kuisa pfungwa pachinhu chimwe" nzira.
The zvakananga sarudzo marongedzero utungamiriri yakaguma, uye yatsiviwa vagadzwa hurongwa. Naizvozvo, President rechi12, Dr. Bum Hee Park, akanga kuzodzosera akagadzwa muhofisi sapurezidhendi anotevedzana rechi13.
Kudeuka chirongwa kuitwa wakashinga nokuda Dr. Bum Hee Park uye dzesangano, ndiye pokugadzwa Hannam kembasi. mu 2007, mumwe gwaro Kunzwisisa akanga vakatsinhanisa pamwe Hannam, uye nokudaro kugadzirira pakusikwa Hannam kembasi vari pari kuitwa.
Muna February 2009, Chung-Ang University, somunhu nzwisisika inisitichusheni, akabudisa imwe chikoro mukuru, nyanzvi girajuweta zvikoro shanu, 11 swa girajuweta zvikoro, 18 modularised mumakoreji vari pazvikoro mhiri Seoul uye Anseong, uye pavakataura dzinosvika 147,196 madhigirii Bachelor zvaJehovha, 29,940 Tenzi wacho madhigirii, uye 4,275 Doctorates.
In March 2014 Chung-Ang University akatanga kubvuma wevhidhiyo vatambi mumaoko avo Department of Sport Science.
Unoda kurukura Chung-Ang University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Chung-Ang University iri Map
Photos: Chung-Ang University pamutemo Facebook
Chung-Ang University wongororo
Join kukurukura pamusoro Chung-Ang University.